घरभाडा तिर्न नसक्ने महिलासँग भाडाको बदलामा यौनसुख माग्ने घरबेटी छ्याप्छ्याप्ती ! - बैदेशिक पोष्ट
घरभाडा तिर्न नसक्ने महिलासँग भाडाको बदलामा यौनसुख माग्ने घरबेटी छ्याप्छ्याप्ती !
कार्तिक २३, २०७८ ०८;२१ बिहान प्रकाशित
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसका कारण गरिएको लकडाउनमा आम्दानीको बाटो बन्द भएपछि भाडाको घरमा बस्नेहरुलाई ठूलो समस्या परिरहेको छ । रोजगारी गुमेपछि मानिसहरुसँग घरभाडा तिर्ने समेत पैसा छैन । यही बीचमा यसरी भाडाको घरमा बसेर भाडा तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका महिलाहरुसँग घरबेटीले घरभाडाको बदलामा यौनसुखको माग गरेका घटनाहरु ठूलो संख्यामा भेटिएका छन् ।